कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने भविष्यवाणी गर्ने को हुन् ? - Media Dabali
कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने भविष्यवाणी गर्ने को हुन् ?
काठमाडौं - झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको नेकपाको सरकार रहेको तथा संसदमा सत्तारुढ दलभन्दा अंकगणितका हिसाबले धेरै पछाडि रहेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ला भनेर सोच्नु पनि गलत हुन्छ ।
तर, राजनीति र प्रेममा जे पनि हुन सक्छ भन्ने भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा पनि कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देख्नु अर्थपूर्ण राजनीतिक परिघटना हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउन सकिने सम्भावना औँल्याउनु र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने संकेत गर्नुले नेपालको राजनीति धेरै पेचिलो बनिसकेको देखिएको छ ।
कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले आफूले मंगलबार पार्टी सभापतिसँग अन्तरंग कुराकानी गरेको र कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्थामा सोच्न सकिने उनको धारणा रहेको सार्वजनिक गरेका छन् ।
‘कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाऊ भनेर प्रस्ताव आयो भने छलफल गर्न सकिने कुरा हो,’ सभापति देउवाको धारणा उद्धृृत गर्दै बुधबार प्रकाशित नयाँ पत्रिकाले श्रेष्ठको कुराकानी छापेको छ ।
‘अहिले कांग्रेस सरकार जान आत्तिएको होइन । अब भोलि उहाँहरूले साँच्चिकै देश चलाउन सक्नुभएन भने र कांग्रेसले एकलौटी सरकार चलाउन पायो भने त्यो वेलामा कांग्रेसले सोच्छ । कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव आयो भने हामीले अवश्य विचार गर्छौँ । अर्काको नेतृत्वमा त किन जाने र ? मैले मंगलबार सभापतिजीसँग भेटेर अन्तरंग कुराकानी नै गरेँ । र, मैले बुझेसम्म एउटा कुराचाहिँ के प्रस्ट हुनुस् भने अहिले आठवटा होइन, १५ वटा मन्त्रालय दिए पनि कांग्रेस सरकारमा जाँदैन,’ श्रेष्ठले भनेका छन् ।